Lokhu Kukhethwa Kwamakhabethe Wendlu yangasese, Ungalokothi Uzisole Ngokuyithenga!
Ikhaya / Blog / Lokhu Kukhethwa Kwamakhabethe Wendlu yangasese, Ungalokothi Uzisole Ngokuyithenga!
2020 / 10 / 11 UkwahlukanisaBlog 2379 0
Uma kukhulunywa ngamakhabethe okugezela, sonke sijwayelene nawo njengendawo yokugezela esezingeni, ethwele umthwalo osindayo wesitoreji sokugezela. Vele, uma ukhetha igama elihle, inani lendlu yangasese nalo lingathembela kulo ukuthuthukisa isandla.
Ngakho-ke ukukhethwa kwekhabethe lokugezela akukwazi ukuba budlabha, okokuqala, ukuya kumthamo, kulandelwe futhi ukulingana isitayela sokuhlobisa yonke indawo yokugezela, njll., Khetha izici eziyinkomba, kulula ukudida abantu.
Ungayikhetha Kanjani IKhabhinethi Yangasese?
1.Khetha Ngokusho Komoya Wokugeza
IKhabethe lekhabethe yindawo ekhangayo kakhulu endlini yokugezela, kungashiwo ukuthi kungumkhiqizo obalulekile wasekhaya ukukhombisa ubuhle nokunambitha komnikazi. Ngakho-ke into yokuqala okufanele uyicabangele lapho uthenga ikhabethe lokugezela yisitayela sekhabethe lokugezela, kufanele lihambisane nesitayela somhlobiso wabo wasekhaya.
Isitayela esisha samaShayina
Isitayela esisha samaShayina akuyona ikhophi elula yesitayela samaShayina, kodwa inhlanganisela yezinto zendabuko ekhishwe kwisitayela samaShayina nezinto zesimanje.
Lesi sitayela sekhabethe lokugezela ngokuvamile siyizinkuni eziqinile njengezinto ezisemqoka, ekwakhiweni ngeke zisebenzise iphethini eyinkimbinkimbi futhi eyinkimbinkimbi, kepha ukukhetha imigqa yejometri elula. Ukusetshenziswa okujwayelekile kwalesi sitayela sekhabethe lokugezela kuzovela kahle kakhulu.
Isitayela Sesimanje Esincane
Amakhabethe wesitayela samanje wesitayela sokugezela anaka kakhulu ukusebenziseka nobuhle. Ngakho-ke, lesi sitayela samakhabethe okugezela ngokuvamile sizosebenzisa imibala ekhanyayo ukuvela kombala, ngenkathi umsebenzi wawo wokugcina unamandla amakhulu, kungashiwo ukuthi ungukukhetha kokuqala emakhaya amancane.
Lesi sitayela sekhabethe lokugezela manje selithandwa kakhulu phakathi kwezintandokazi zabantu abasha, ngenxa yokuthi silula futhi sinomusa kepha asilahlekelwa umqondo wokuklanywa, kepha futhi nesitayela sasekhaya esinomdlalo ophelele.
Isitayela saseMedithera ngokungangabazeki siyingqayizivele kunazo zonke izitayela zokuhlobisa. Njengoba isitayela saseMedithera sivela ogwini lwe-azure lwaseSpain namabhishi anesihlabathi esimhlophe, okumhlophe nokuluhlaza okwesibhakabhaka yimibala yawo ephambili. Futhi le mibala emibili ingadala umuzwa opholile, okhululekile.
2.Khetha Ngokuya Ngokwakhiwa Kwesakhiwo
IKhabinethi Yokulengisa Elilenga
Amakhabethe amisiwe okugezela yizona ezikhethwa kakhulu emakhaya amaningi. Ngenxa yokwakheka kwayo okuphelele ngaphansi, okuhlukanisa ikhabethe phansi, kusabalalisa ngempumelelo umswakama nomswakama, kuvimbele ukuthi kungenzeka umswakama uhlasele ikhabethe.
Ngaphezu kwalokho, futhi kunenzuzo yokwandisa umqondo wesikhala. Ngakho-ke noma ngabe kuyindlu encane, efakwe naleli khabethe lokugezela elinochungechunge olufanayo lwekhabethe lesibuko, ngeke uzizwe ugcwele.
Amakamelo Wokugeza Okumile Phansi
Uma kuqhathaniswa nokulenga amakhabethe okugezela, lolu hlobo lwekhabethe lokugezela alunayo imfuneko yezindonga lapho ifakiwe.
Kodwa-ke, njengoba indlu yokugezela imanzi isikhathi eside. Ikakhulukazi uma ikhaya lingomile futhi lingenamanzi, amakhabethe okugezela phansi kuya phezulu avamise ukuhlangana namanzi, ngaleyo ndlela kudaleke umonakalo kwikhabhinethi, kuthinte impilo yokusebenza.
Ngakho-ke, lapho uthenga amakhabethe okugezela phansi, qiniseka ukuthi ukhetha ungqimba olunamacala amabili olungenamanzi lekhabethe lokugezela, okuwukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthi ukwakheka kwangaphakathi kwekhabethe lokugezela phansi akulona elikhubazekile, ukuze kwandiswe impilo yomsebenzi.
3. Ngokuya Ngokukhethwa Kwempahla yeKhabinethi
Uma kuqhathaniswa nezinye izinto zekhabethe lekhabethe lokugezela, amakhabethe enziwe ngokhuni oluqinile impela anobungani bemvelo futhi anempilo, njengoba ifenisha yezinkuni ivame ukwenziwa ngqo kusuka ezinhlobonhlobo zezinkuni njengezinto zokusetshenziswa.
Kodwa-ke, ngenxa yokucaciswa kwendawo yokugezela, izinkuni zenjoloba ngokuvamile zisetshenziselwa ukwenza amakhabethe okugezela. Le nkuni ikhonjiwe futhi ingenamanzi, kanye nenye inqubo yokuvimbela ukungena kwamanzi ukuze kungangenwa amanzi futhi kufakazele umswakama.
Amakhabethe okugeza enziwe ngalokhu kungadala kalula indawo yokugezela ngomuzwa wanamuhla futhi kulula ukuyihlanza. Kodwa-ke, kufanele uqaphele ngezinto ezibukhali ukugwema ukulimala kokungqongqoza ngesikhathi sokusetshenziswa kwansuku zonke.
Lokhu okuqukethwe kuhle kakhulu anti-slip anti-scratch ukusebenza, kungashiwo ukuthi kuyisondlo esihle kakhulu sezinto zekhabethe lokugezela.
Kodwa-ke, okokusebenza kwe-PVC nakho kunokubi: uma ubeka izinto ezisindayo kuso isikhathi eside kulula ukusonteka, ngakho-ke usayizi ojwayelekile wale khabethe lezinto zokugezela uzoba mncane, ulungele imindeni emithathu ukuthi uyisebenzise.
Ungayigcina Kanjani IKhabhinethi Yangasese?
1. Ukuhlanza IKhabhinethi Yangasese
1, ikhabethe lokuphambanisa amanzi ekhabethe lokugezela, imvamisa ngendwangu enomswakama ingasulwa ngobumnene ukugwema ukugqwala okubangelwa amanzi.
2, okokuhlanza okuhle kakhulu ukusebenzisa ukungathathi hlangothi, ukusetshenziswa okungajwayelekile komuthi wokuxubha endlini yangasese nakho kuyimikhiqizo emihle yokuncipha.
I-3, ikhabethe lokugeza lizovame ukufakwa kwesinye insipho, izihlanzisi neminye imikhiqizo yokuhlanza, ukugeleza ngokunganaki okokuhlanza kungcono ukusula ngokushesha (noma kwimikhiqizo yokuhlanza engezansi kwendwangu yendwangu).
2 Ukulungisa IKhabhinethi Yangasese
I-Lacquer scuffs, ingathinti upende ongaphansi kokhuni, etholakala ngombala wekhabethe ikhrayoni efanayo noma i-pigment, ekhabethe le-trauma smear ukumboza umbala wesisekelo oveziwe, bese kuthi ungqimba lwe-nail olusobala lube ungqimba oluncane.
3 Amathiphu Wokusetshenziswa KweKhabhinethi Yangasese
1, ikhabethe lokugezela ekuphatheni, kufanele liphakanyiswe kancane futhi libekwe kancane, ungadonseli kanzima; njengesibuko sekhabethe kanye nokuxhumana komhlaba, kufanele kufakwe ngezinto ezithambile, ukuze ungalimazi; umhlabathi awuyona isicaba, kufanele kube imilenze eqinile pad.
2, ukufakwa kwamanzi epayipini bese uya kumbhobho wamanzi ukuxhuma okuminyene, futhi udinga ukuhlola njalo ukugwema ukuvuza okuthinta ikhabethe.
I-3, ayizukusebenzisa izinto ezinzima ezibukhali ukuklwebha ubuso bekhabethe, ukuze ingabangeli ukulimala komhlaba okudalwe yimithombo yamanzi.
4, ukuvimbela ukukhanya okuqondile, ukuvimbela ikhabethe ukuthi lingonakali. Gcina igumbi lingena umoya.
Izitayela ezahlukahlukene, izitayela ezahlukahlukene zamakhabethe okugezela zingahlala zikulethela umuzwa ohlukile. Lokhu okungenhla kumayelana nokukhethwa nokunakekelwa kwamakhabethe okugezela, ngiyethemba kuzokusiza.
Edlule :: I-Smart, i-Contactless, i-Crossover Goes Mainstream! Ukuvezwa Kokusha Kwamakamelo Okusha Kwangaphandle Olandelayo: Lokhu Kukhethwa Kwamakhabethe Wendlu yangasese, Ungalokothi Uzisole Ngokuyithenga!
Ubani Obenenhloni Yokususa Ihlathi Egumbini Lokugeza! Kepha ngithanda ~~~
Ukubuyekezwa Kwompompi WeDelta: Umhlahlandlela Wokuthenga Wekhishi, Igumbi Lokugeza, Amasistimu Weshawa, kanye ...
Izincomo ezingaphezu kuka-10,000 Kumklamo Wendlu yangasese, Iqoqo eliphakanyisiwe!